पर्यटन विकास गर्नेलाई भोट !
स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पार्टीका नेताहरुको यति दौडधुप देखिन्छ कि जसरी पनि चुनाव जित्नु छ । केवल चुनाव जित्ने दाउमात्र गर्नेले के विकासको योजना ल्याउला ? उसंग के भिजन होला ? यसपटक जसले मकवानपुरको समृद्घि हुने पर्यटन क्षेत्रको विकासका लायि भिजन बनाएर अघि बढ्छ उसलाई नै आ–आफ्नो क्षेत्रबाट जिताउनका लागि जनता लाग्नुपर्छ । मकवानपुर ऐतिहासिक विशेष महत्व बोकेको पर्यटनको ठूलो सम्भावनायुक्त जिल्ला हो । विभिन्न विकासे संस्था, नेता, व्यक्तिले मकवानपुरको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि योजनाहरु अघि सारे पनि खासै काम हुन नसकिरहेको तीतो यथार्थ हामीहरुका बिचमा छ ।
मकवानपुरका पर्यटन क्षेत्रहरु शहिद स्मारक, कुष्माण्ड सरोबर त्रिवेणीधाम, भुटनदेवी मन्दिर, पशुपति क्षेत्र,पुष्पलाल शान्ति पार्क, मनकामना मन्दिर, पाथिभरा मन्दिर भैरव डाँडा, हर्नामाडीस्थित गुम्बाडाँडा, मकवानपुरगढी लगायत पर्यटकीय क्षेत्रका विकासका सम्भावनालाई चिन्ने र यहाँको विकासका लागि लगानी गर्नेको खाँचो छ अहिले । यो क्षेत्रको विकासका लागि म लागिपर्छु भनेर हिम्मत सहित आउने कोही छ भने उनीहरुको योजना सुनेर उसलाई समर्थन गर्न मकवानपुरबासी तयार भए हुन्छ । तर धोका हुनुहुन्न । हाम्रा सम्भावनाको गफ चुटेर मत बटुल्ने अनि कुलेलम ठाक्ने काम कोही कसैबाट पनि कुनै हालतमा हुनुहुदैंन ।
चुनावका बेलामा असल मान्छे भन्दा पनि आफ्नो पार्टीले नै चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने पार्टीप्रति आस्था राख्नेहरुलाई लाग्नसक्छ , यसप्रति मेरो आपत्ति छ । गफमात्र चुट्ने तर काम नगर्ने नेता जुन पार्टीको भएपनि कुनै अर्थ छैन । साँच्चै भिजन सहित काम गर्ने नेता हो भने पार्टी हेर्ने होइन, व्यक्ति छान्ने हो । यसको योजनालाई जिताउने हो । अहिले हामी पछाडी परेको कारण पनि यही त हो नि आफूलाई पार्टीका मान्छे उठे भने जस्तोसुकै भएपनि भोट दिनुपर्ने । तर अब यस्तो सोचाईमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । चुनावका बेला पार्टी नहेरौं, मकवानपुरको समृद्घिका लागि काम गर्ने विश्वास लाग्ने व्यक्तिलाई छानौं ।
कविता चौलागाईं, मकवानपुरगढी गाउँपालिका ६, मकवानपुर